गाउँमा हरीयो सब्जीको लहरा भन्दा धेर फल्दैछ रातो रिबन – Sikkim Journal
सिक्किममा बड्दो कोरोना संक्रमणले मानिसहरूलाई फेरि त्रसित बनाइरहेको छ। केही समय अघि अलिक नियन्त्रित बनेको कोविड सकारात्मक दरले मानिसलाई फेरि सामान्य जीवनमा फर्किन्छौं कि भन्ने आशा देखाएको तर अहिलेको स्थितिमा त्यो निरासाजनक देखिएको छ। राज्य सरकारले लगभग तीन महिनादेखि आङ्शिक लकडाउनको साथमा मानिसहरूलाई राहत दिएको थियो तर त्यो राहत मानिसलाई कम र कोरोनालाई धेर देखियो, जो अकाट्य सत्य हो।
सरकारले मानिसहरूको चहल-पहलको निम्ति समय सीमा तय गरिदिएपनि कोरोनाले सरकारले तय गरेको समयको पालन गरेको पाइएन। हाल राज्य सरकारले कोविड-19 चेन ब्रेक गर्नको निम्ति मानिसहरूलाई नै नियन्त्रणमा ल्याउने नीति अपनाएको छ। कोरोनाको पहिलो चरणमा पुलिसको डण्ठा, उठ-बस, कम्ति रकमको चलानसँगै दोस्रो लहरदेखि डेल्टासम्म पुकेको कोरोनाले अहिले गाउँ बस्तिमा लुकेर बसेको केही आर्थिक रकम पनि सरकारी तिजोरीमा तान्ने स्थिति देखिएको छ। हुनत यसमा गाउँलेहरूले कोविड नियम पालन नगरेको कुराहरू अघि आउला, तर गान्तोक, नाम्ची, गेजिङ् आदि बजारहरूमा स्वतन्त्ररूपमा घुमेको भीडलाई हेर्दा गाउँप्रतिको प्रशासनिक दृष्टि भने अलिक भारी नै अड्कल गर्न सकिन्छ।
अहिले धेरैवटा सामाजिक सञ्जालमा पुलिस प्रशासनले गाउँमा कोरोनाको नामलाई लिएर कड़ाई गर्ने गरेको गुनासोहरू सार्वजनिक हुँदैछन्। गुनासो पनि किन नहोस त, आखिर दिनभरि खेत बारिमा पसिना बगाएर कमाएको एक हप्ते रकम त्यो पनि चलानमा गयो भने मानिसहरूले नुन-तेल कहाँबाट किन्ने। सिक्किमको ग्रामीण स्थितिलाई नियाल्दा बीपीएल चामल र एमजी नरेगाले लुटेको ग्रामीण जीवीकोपार्जन स्थितिमाथि कोरोनाको प्रकोप असह्य नै भएको छ। अहिले गाउँमा सब्जी फल्न छोड्यो, धान-मकै, कोदो-गहुँ आदिको त कुरै नगरौं। अहिले ग्रामीण भेगमा हरीयो सब्जीभन्दा धेर रातो रिबन धेर देखिन थालेको छ। यस्तो स्थितिमा गाउँलेहरूले आफूलाई कुन आशामा बचाइ राख्ने हुन् यस समस्याको समाधान खोज्न अनिवार्य देखिएको छ।
यस संक्रमण कालमा धेरै बुद्धिजिवीहरूले कोरोनाबट बाँच्ने उपाय त विभिन्न माध्यमबाट देखाएका छऩ्, तर मानिसलाई कोरोना कालमा भोकबाट बाँच्ने उपायहरू भने कसैले सिकाएन। कतिपयः स्थानमा आफ्नो जीवीकोपार्जनको निम्ति दिनभरी काम गरेको रकमले बेलुकी आफ्नो छाक टार्ने मानिसहरू पनि छन्। यस्तो स्थानमा सरकारले तोकिएको समयावधीसम्म एउटा गाउँ नै रेड जोन हुँदा दैनिक ज्याला कमाएर खटिखाने श्रमिकहरूको स्थिति के होला? श्रमजिवीहरूले कसरी आफ्नो पेट पालो गरिरहेकाछन् ? यस्ता विषयमा अहिलेसम्म कुनै पढताल देखिएको छैन। सरकारले कोविड नियन्त्रणसँगै गाउँले जीवनमाथि पनि अध्ययन गरेर ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दाहरूको निम्ति अलग नीति बनाउन आवश्यक छ।